Seychelles Gurukota Vanosimudzira Meseji paZuva Rekushanya reNyika
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles Gurukota Vanosimudzira Meseji paZuva Rekushanya reNyika
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • misangano • nhau • vanhu • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Seychelles Gurukota paZuva Rekushanya Pasi Pose
Pazuva rino gore rega rega, Seychelles inobatana nedzimwe nyika zana nemakumi masere neshanu dzesangano reWorld Tourism Organisation (UNWTO) mukurangarira Zuva reWorld Tourism Day. Zuva iri rinoratidzira kukosha kweindasitiri yekufambisa neyekushanya, uyezve sezuva rekupemberera nekuratidzira. Pasi penyaya yedu "Kuumba ramangwana redu," tinoombera vanhu vedu nemipiro yavo.
Seychellois yega yega, chikamu chega chezviitiko zvehupfumi munyika zvinofanirwa kuve nechekuita mukubatanidza kukura.
Nekuda kwe COVID-19, senge dzimwe nyika dzese pasi pano, Seychelles yakatarisana nekudonha padyo kweindasitiri yekushanya.
Rudzi rwacho rwakakurumidza kuona kuti kuchinjika kumamiriro anochinja ndicho chinhu chikuru pakurarama kwaro.
UNWTO yakasarudza Zuva reWorld Tourism Day 2021 sezuva rekutarisa paKushanya kweKubatanidza Kukura. Kukura kwekusanganisira ndiko kwatiri kuedza sezvo isu tichitsvaga kupora kubva kune zvakakonzerwa nedenda. Uye ichafambiswa nekushanya. Inotarisana nemumwe nemumwe wedu, uye neSeychellois yega yega, chikamu chese chezvehupfumi munyika medu chinofanirwa kuve nechekuita nenzira iyi. Kunyanya muiyi "tsika itsva."
Takatarisana nekudonha padyo kweindasitiri yedu, takaona kuti kuchinjika kumamiriro anochinja ndiyo yaive kiyi yekupona kwedu. Takatora njodzi hombe asi dzakaverengerwa, kubatanidza kudzoreredza hupfumi uye kudzivirirwa kwehutano uye kuchengetedzeka kwevanhu vedu uye nevashanyi kuburikidza nekumisikidzwa kutanga kwa2021 chirongwa chakasimba uye chakakura chekubaya nhomba kurwisa COVID-19, zvichitibvumira kushinga kuvhura nyika munaKurume. Isu tave kutora izvo zvikamu zveaya matanho atakatora pamwechete.
Asi isu hatifanire, uye hatigone, kusagutsikana. Hatisi toga mukuchinjika kune zvitsva zvakajairwa. Vanokwikwidza vedu vane hukasha zvakaenzana uye vane hunyanzvi mumakampeni avo ekutengesa zvekushanya. Mukutarisana nemakwikwi anotyisa uye asingaregi, isu tinofanirwa kuramba tichipa kukosha kwemari. Tinofanirwa kuona kuti pekugara nemasevhisi atinopa ari kusvika padanho, uye akatokwira pane zvinogamuchirwa uye zvinotarisirwa. Isu tinofanirwa kutarisa zvakanyanya pakupa hukuru hwakanyanya hwechokwadi uye hwemunharaunda-hwakavakirwa zviitiko zvekushanya zvinoratidza chiratidzo chedu. Zvakare, uye pasina kukosha kwakaderera, isu tinofanirwa kuenderera nekudzimisa zvese zvisiri pamutemo uye zvakavanzika zviitwa zvinokanganisa indasitiri yedu yekushanya uye yekugamuchira vaeni, uye unounza ruzvidzo kumufananidzo wedu.
PaZuva reNyika reKushanya, saka ndinodaidzira kubatana, kubatana mukati mechikamu chekushanya. Nekuti, pamusoro pehuwandu, isu tinoziva kuti kuseri kwechimiro chimwe nechimwe maererano neiyi indasitiri, kune anoshanda, kune vakadzi nevarume. Saka kusimudzira indasitiri yedu yezvekushanya kusvika pamwero wepamusoro nekukunda matambudziko ari mberi, pasina kurerutsa munhu, tinofanira kubatana. Nevose vachigovana chiratidzo chakafanana uye chishuwo chimwe chete ku ona kushanya kuchibudirira, nekushanda kunyanya pamwe chete, tichabuda mukukunda. Pane kusahadzika kushoma.
Nekuyemura kukuru kuzvipira kwako uye neshungu, tinokutendai nekuisa moyo yenyu muindasitiri yedu yekushanya.
Nhasi tinokupemberera. Rakanakidzwa Zuva Rezvekushanya Pasi Pose!
China Inotungamira Nzira neGlobal Green Economy